सामान्य झरीमा पनि किन हुन्छ जलमग्न धनगढी ? – Sodhpatra
सामान्य झरीमा पनि किन हुन्छ जलमग्न धनगढी ?
प्रकाशित : ८ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:३५ August 24, 2021
धनगढी: सामान्य वर्षा हुँदा पनि धनगढीका विभिन्न वडाहरू र धनगढी बजार क्षेत्रका मुख्य सडकहरू जलमग्न हुने गरेका छन् ।
यसको मुख्य कारण हो । दिनप्रति दिन खोलानालाहरू अतिक्रमण हुनु, नाली सरसफाइ नहुनु, निर्माण समाग्रीहरु सडकका पेटी नाली छेउमै राख्नु र निर्माण भएका सडकका नाली मापदण्ड विपरीत सडक भन्दा बढी अग्ला हुनु जो यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले समेत स्विकारी सकेका छन् ।
यस क्षेत्रका सडकहरू खालामा परिणत हुने गरेका छन् । सडकमा पानी बग्न थालेपछि सर्वसाधारणहरूलाई आवतजावत गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ । यस्तै गए राति देखि परेको वर्षाले वडा नम्बर १ शिवनगर लगायतका क्षेत्र जलमग्न भएका छन् ।
पानी निकास नहुँदा सडकमै पानी बग्न थालेपछि हिँडडुल गर्न समस्या भएको सर्वसाधारणहरुले बताएका छन् । खाला अतिक्रमण र ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले बेला–बेलामा डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले उचित ढल निकास लगायतका विषयमा ध्यान नदिँदा बर्सेनि आफूहरू डुबानको चपेटामा पर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ ।